Global Voices teny Malagasy » Trinidad Sy Tobago: Miverina Mandinika Ny Lalànan’ny Fanambadiana Taorian’ny Tosika Hanekena Fa Fanararaotana Ny Fanambadian’Ankizy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jona 2016 7:50 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Karaiba, Trinite sy Tobago, Fahasalamàna, Fanabeazana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Sary avy amin'ny famoahan'ny gazetiboky Global Child momba ny fampitsahrana ny fanambadian'ankizy. Sary avy amin'ny mpampiasa flickr RubyGoes, nampiasàna ny lisansa CC BY 2.0
Fiaraha-monina iray ahitana fifanoheran-kevitra i Trinidad sy Tobago: vao herintaona monja izay, nakarina  ho 16 hatramin'ny 18 ny taona anekena ny fahafahana manao firaisana ara-nofo, na dia mbola tavela anaty boky aza ny lalàna ntaolo be iray – Ny Lalàn'ny Fanambadiana  tamin'ny taona 1923 – nitanisàna ny taona ara-dalàna hahazoana mandeha manambady ho 12 taona ho an'ireo ankizivavy ary 14 taona ho an'ireo ankizilahy.
Mitranga matetika any amin'ny firenena silamo sy any amin'ireo vondom-piarahamonina Hindou ny fomba fanao mampanambady ny ankizy – ary sahala amin'ny toa maniry ny hitazona izany ireo lehiben'ny fivavahana sasany. Tany ampiandohan'ity herinandro ity, Frera Harrypersad Maharaj, mpitarika ny Fikambanana Iraisam-pinoana  ao amin'ny firenena (IRO), vondrona iray izay mampivondrona ireo solontena avy amin'ireo vondrom-pivavahana samihafa ao amin'ny firenena ary mihambo ho “miteny amin'ny Firenena momba ireo olana ara-tsosialy, ara-maoraly ary ara-pivavahana”, nilaza  fa tsy tokony hanova ny Lalàna mikasika ny Fanambadiana ny Fanjakana satria “tsy ny taona no mamaritra ny fahamatorana”. Nampian'i Maharaj fa niray hevitra momba ilay olana ireo mpikambana ao amin'ny IRO. Nanohana azy ny solontena iray avy amin'ny IRO, Shouter Baptist Archbishop Barbara Burke, izay nilaza fa hitolona amin-kery hanohitra ny fitsabahan'ny governemanta  amin'ny Lalàn'ny Fanambadiana Miozolmana sy ny Hindou ny IRO mikasika ny fitsabahany amin'ireo Lalàna mifehy ny fanambadiana Silamo sy Hindou. Niaky izy, na izany aza, fa solontena 18 monja tamin'ireo fivavahana 25 eo amin'ny firenena no tonga tamin'ilay fivoriana.
Ny arseveka katolika, Joseph Harris , izay tsy nanatrika, taty aoriana kely niantso  ny fampanambadiana an-terisetra ireo ankizy hoe “fanolanana ara-dalàna”. Ny eveka anglikana koa niantso mba hamerenana hijerena  indray ny lalàna efa misy momba ny fanambadiana, na dia nheverin'ilay tranonkala Wired868  miresaka fanatanjahantena sy vaovao malaza aza, izay nanondro ny fanambadian'ankizy ho toy ny “fanolanan-jaza eken'ny fanjakana”, ho miovaova hevitra be ihany ilay Eveka mikasika ilay olana.
Tamin'ny 2011, nanamafy ny Birao Foiben'ny Antontanisa  fa ankizivavy maherin'ny 8.400 sy ankizilahy 1.300 latsaky ny 19 taona no nanambady teo anelanelan'ny taona 1997-2007. Tsara ny manamarika fa i Trinidad sy Tobago dia anisan'ny mpanao sonia ny fifaneken'ny Firenena Mikambana momba ny zon'ny ankizy (UNCRC), izay mamaritra ireo zaza tsy ampy taona ho “ny olona rehetra latsaky ny 18 taona”. Ao anatin'ny fifanarahana , manaiky ireo mpanao sonia fa hiaro ireo ankizy amin'ny ratsy sy fanararaotana ary hikatsaka izay tombontsoa mendrika ho an'izy ireo.
Eo amin'ny fampiharana, na izany aza, tena samihafa ny zava-misy. Misy vazivazy hafa-loko iray izay ataon'ny olona maro – “Aorian'ny amin'ny 12 taona ny sakafo” – midika hoe rehefa mihoatra ny 12 taona ny zazavavy iray, tsy voafetra intsony amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Ao an-toerana, sy any amin'ireo faritra maro, mety ho ara-toekarena ny antony mahatonga ny fampanambadiana zaza iray; mety misy ifandraisany amin'ny resaka voninahitra  ihany koa izany – tsara kokoa ny tanora iray manambady rehefa mitondra vohoka toy izay itondran'ny fianakaviana henatra. Amin'ireo tranga sasantsasany , afaka misafidy hanambady izay naolany ny mpanolana iray ho làlana handosirana ny fitsaràna. Nitana toerana lehibe teo amin'ny adihevitra natao vao haingana ihany koa ho fanoherana ny fitomboan'ireo herisetra ao an-tokantrano sy ny fanafihana hanaovana firaisana ara-nofo amin'ireo vehivavy, ao anatin'izany ireo zaza tsy ampy taona. Ny 18 May lasa teo, lehilahy iray 36 taona no nosamborina  taorian'ny nanavotan'ny mpitandro filaminana tovovavy roa nodontoina tamin'ny zavamahadomelina tao anatin'ny fiarany. Nanamafy ny ray amandrenin'ireo ankizivavy fa naman'ny fianakaviana ihany ilay lehilahy.
Mazava ho azy, maro ireo tsindry avy amin'ny vahoaka momba ilay olana; namoaka fanambaràna  ny governemanta fa “tonga ny fotoana hampitoviana ny taona tokony handehanana manambady [araka ny taona feran'ny lalàna mikasika ny fidirana eo amin'ny firaisana ara-nofo ifanekena] mba hiarovana ny zon'ny ankizy hankafy fiainana” ary nampanantena  ny lehiben'ny fampanoavana ao amin'ny firenena fa ato ho ato dia hanao fanambarana mikasika ilay olana. Namoaka fanambarana iray  ny biraon'ny Praiminisitra izay afaka manome topimaso momba ny zotra mety horaisin'ny governemanta amin'izao fotoana izao manoloana ilay olana, tamin'ny filazàna fa :
Nitombo be ny hantsana teo amin'ny taona handehanana manorina tokantrano (12, 14 ary 16 amin'ireo fotoana izao) sy ny taona ahafahana mifanaiky hanao firaisana ara-nofo ara-bakiteny (18 taona), hatramin'ny nanambaràna ny Lalàna momba ny Ankizy 2012 tamin'ny May 2015 ary tsy maintsy halamina.
Ho an'ny ankizy, ny fanambadiana aloha loatra dia mety hiteraka […] : tsy fahafahana manohy fianarana; olaan goavana ara-pahasalamana oy ny vohoka aloha loatra sy ny areti-mifindra azo avy amn'ny firaisana satria ny ankizy tsy afaka hisoroka ilay firaisana na hisisika amin'ny hampiasàna fimailo/kapaoty; loza mitatao noho ny fitondrana vohoka aloha loatra, toy ny fahafatesana eo am-piterahana, mitera-doza ho an'ny fahasalaman'ilay reny tanora sy ny zanany; ary mampitombo ny mety ho herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na vavy.
Etsy andaniny, ny fanambadiana aloha loatra mandritra ny fahazazana dia mamarana ny maro amin'ireo singa mifandray amin'ny fahazazàna sambatra sy salàma, ary mamorona koboriborim-pahantràna noho ny fampihenana ireo fahafahana manabe ireo zaza voakasik'izany.
Manambara ireo antontan'isa n'ny Firenena Mikambana ho an'ny taona 2002-2012 fa 1,8 isan-jato ny salanisan'ireo zaza nanambady teo amin'ny faha-15 taonany ary 8,1 isanjato ho an'ny 18 taona. Tranga mahaliana iray, nanohana ny hevitry ny governemanta ny Fikambanam-behivavy mavitrika Hindou, niantso fampiatoana ny fampanambadiana ankizy sy ny mba hampianarana ny fanabeazana ara-pananahana any an-tsekoly (zavatra iray izay raràn'ireo mpitondra fivavahana maro ihany koa).
Haingana be ny tabataban'ireo olona tao anaty media sosialy. Misy fanangonan-tsonia natao tamin'ny tambajotra iray  mitaky ny famaranana ny fanambadian'ankizy ao amin'ny firenena, izay nahazoana mpanohana manodidina ny 3.000 sahady. Tao anaty Facebook, nivatravatra ireo mpisera amin'ny aterineto mikasika ireo fomba fijeren'izy ireo. Nilaza  i Rhoda Bharath fa:
Ao amin'ny IRO 102.1 milaza ny Filoha Harrypersad Maharaj fa tsy azo resahana any antsekoly ny fanabeazana ara-pananahana.
Nanontany izy hoe iza no hampianatra ireo fampiharana.
Milaza izy fa mitarika fitomboan'ny fisaraham-panambadiana ny fampiatoana ny fanambadian'ankizy
Milaza izy fa nanao fanapahan-kevitra niombonana ny IRO. Ny IRO no IRO. Ny 17 amin'ireo vondrom-pivavahana 25 no tonga tamin'ny fivoriana.
Hitanareo ve ny haavon'ny tsy fahalalantsika atrehantsika?
Fanararaotana atao amin'ny ankizy ny Fanambadian'ankizy!
Mpampiasa media sosialy maro no niantso ny mpitarika ny IRO mba hisintona ny heviny , nizara ity sary fampieritreretana  ity teo amin'ny Facebook:
Sary fampieritreretana, nozaraina be tao amin'ny Facebook, izay nampahafantatra ireo tenirohy nampiasaina mba hisolo vava hampiatoana ny fanambadian'ankizy ao Trinidad sy Tobago.
Ho valin'ireo fanambaràna nataon'ireo mpikambana sasantsasany tao amin'ny IRO mikasika ny hijanonan'ny fanjakana any ivelan'ireo olana ara-pivavahana, nilaza  ny mpampiasa media sosialy, Mark Lyndersay, fa:
Eny, tsy maintsy mijanona any ivelan'ny fiangonana ny Fanjakana. Ary ny fiangonana tsy maintsy mijanona ivelan'ny Fanjakana. Atombohy amin'ny fanorenana ireo efitrano fivavahanareo ihany izany.
Manana tantara sarotra  i Trinidad sy Tobago mikasika ireo karazam-pivavahana tohanan'ny fanjakana ara-bola mba hanorenana ireo fiangonana.
Nandray anjara tamin'ny tsikera ihany koa ireo mpikambana amin'ny zanaka ampielezana. Cherise d'Abadie, izay monina any Etazonia ankehitriny, nilaza tao amin'ny adihevitra fa :
Tahaka ny mijery mivantana ny fahaterahan'ny Fetin-dite T&T iray
Nizara rohy iray  mikasika an'i Theresa Kachindamoto, lehiben'ny foko izay nanafoana ny fanambadian'ankizy an-jatony, ny Trinidadiana iray mpampiasa Facebook, Charlene Thompson, izay monina ao Afrika, nanao hoe :
Hiteny mandritra ny TEDxLlongwe amin'ny faran'ity herinandro ity io vehivavy mahatalanjona io. Fanitsakitsahana ny zon'ireo ankizy ny fampanambadiana ankizy. Manaova fikarohana azafady, vakio ary fantaro hatraiza no mampidi-doza ny fampanambadiana ankizy. #‎faranonyfanambadian'ankizy #ireozon'nyankizy  ‪#‎tsylohahevitraiadiankevira ‬ ‪#‎lafatranohoizaoitrinidadsytobago 
Tsy vitan'ilay tranonkala The Late O'Oclock News ny tsy hanao esonteny momba ilay olana, na, nandefa tantara mahazendana iray mikasika ny namadihana  ny toeram-pitsaboana ho an'ireo ankizy  tao amin'ny firenena ho lasa toeram-pandihizana ho an'ny IRO “mba hananana toerana iray azo antoka iarahan'izy ireo amin'ireo ankizy vadiny”. Teo amin'ny Twitter, na izany aza, maro ireo mpisera amin'ny aterineto no tezitra mikasika ny olana:
Mikiakiaha ho ren'ny fiangonana Katolika mba hirosoana momba ny olana iray ara-pinoana mampiady hevitra #arovynyankizivavintsika  farano ny fanambadian'ankizy ao TT
Aretina ara-tsosialy iray ny fanambadian'ankizy http://t.co/Q0KzwVnXYm  Tsia! Fahavetavetàna mamadika ho ara-dalàna ny fanolanan-jaza io ##fanambadian'ankizy  #Trinidad  #Tobago 
Ary dia mitohy ny adihevitry ny daholobe mikasika ny olana izay maro no mahatsapa hoe tsy tokony napetraka hiadiana hevitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/05/82852/
 Lalàn'ny Fanambadiana: http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/45.01.pdf
 Fikambanana Iraisam-pinoana: http://www.iro.co.tt/
 hitolona amin-kery hanohitra ny fitsabahan'ny governemanta: http://www.looptt.com/content/archbisp-barbara-burke-warns-govt-stay-out-religion
 niantso mba hamerenana hijerena: http://www.looptt.com/content/anglican-bishop-calls-review-marriage-legislation
 nanamafy ny Birao Foiben'ny Antontanisa: http://cso.gov.tt/
 Ao anatin'ny fifanarahana: http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
 Amin'ireo tranga sasantsasany: http://www.guardian.co.tt/news/2011/11/05/child-marriages-still-practised-tt
 namoaka fanambaràna: http://www.trinidadexpress.com/20160518/news/govt-a-child-should-not-get-married
 fanambarana iray: http://wired868.com/2016/05/18/office-of-the-pm-responds-govt-sees-critical-need-to-end-child-marriages/
 fanangonan-tsonia natao tamin'ny tambajotra iray: https://www.change.org/p/country-end-child-marriages-in-trinidad-and-tobago-now
 ‪#‎ProtectOurGirls : https://www.facebook.com/hashtag/protectourgirls?source=feed_text&story_id=10154172674042812
 hisintona ny heviny: https://www.facebook.com/abeo.jackson.9/posts/10100145886863524
 sary fampieritreretana: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154173906327812&set=a.10150225400692812.349190.575067811&type=3&theater
 tantara sarotra: http://www.trinidadexpress.com/news/DPP_clears_Manning__Pena-194417191.html
 nilaza tao amin'ny adihevitra fa: https://www.facebook.com/cherise.dabadie/posts/10153913621300141
 rohy iray: http://www.inhabitots.com/female-chief-in-malawi-breaks-up-850-child-marriages-and-sends-girls-back-to-school/
 nanao hoe: https://www.facebook.com/charlene.thompson.568/posts/10207882697923151
 ny toeram-pitsaboana ho an'ireo ankizy: https://globalvoices.org/2016/02/07/broken-is-the-road-of-political-promises-in-trinidad-tobago/